Ukwakha Izivakalisi eziNgekhoyo ngesiFrentshi
NgesiFrentshi, udinga amagama amabini angalunganga, ezelwe ( hayi ) kunye hayi ( hayi ), ukwenza isivakalisi esibi. Hayi unokutshintshwa ngamanye amagama angento, anjenge soze ( soze ), Akukho mntu ( Akukho namnye ), kunye akhonto ( akhonto ). Nantsi enye into ekufuneka uyazi ukuze wenze isivakalisi esingesiFrentshi:
La magama mabini mabi abekwe macala onke (ngaphambi nasemva) kwesenzi esidibeneyo, ngolu hlobo: Awudlali. ( Awudlali. )
Ukuba isenzi esidibeneyo siqala ngesikhamiso, ezelwe iba n ’ . Umzekelo: Abanayo inja. ( T Hayi musa yinja . )
Kumyalelo ongalunganga, ezelwe kwaye hayi Ngqonge isenzi, nokuba akukho sihloko kwisivakalisi. Umzekelo: Sukwenza lonto! ( Sukwenza oko! )
Kwisivakalisi esinezimelabizo zento, ezifana yiyo , yena , okanye yena ukubekwa ezelwe utshintsho olunje: isihloko + ezelwe + isimelabizo + isenzi + hayi . Umzekelo: Andizange ndiyibone. ( Andizange ndimbone. )
Sebenzisa nanye / hayi ( akukho / akukho namnye ) njengegama lesibini elibi kwisivakalisi ukunyanzelisa ubuninzi be-zero. Umzekelo: Andinaluvo! ( ndine Andinalwazi kwaphela! )
Ukuba isenzi silandelwa sisimaphambili, njengakwi dlala nge ( ukudlala kunye ), ukubekwa kwe- hayi / utshintsho lwesibini olubi ngolu hlobo: isifundo + ezelwe + isenzi + isimaphambili + hayi / isibini esibi. Umzekelo: Akadlali namntu. ( Udlala kungekho namnye. )
Ngezenzi kwi ixesha eligqibeleleyo ( bonisa ngokugqibelele ), gcinani engqondweni ukuba isenzi esidibeneyo sisincedisi ukuba (ukuba) okanye ukufumana ( ukufumana ), hayi inxaxheba edlulileyo! Umzekelo, Akahambanga. ( Khange ahambe. Nantsi ifomula: Isihloko + ezelwe + ifom ehlanganisiweyo ye ukuba okanye ukufumana + hayi + Ixesha elidlulileyo.
Kwi ixesha eligqibeleleyo , igama lesibini elibi Akukho mntu ( Akukho namnye ), naphi na ( naphi na ), ni ( ayiyo enye okanye ), kunye hayi ( nanye ) + isibizo yiya emva kwenxaxheba edlulileyo, hayi ngaphambili. Ukuzalwa ihlala kwindawo enye. Umzekelo: Asibonanga mntu. ( Asibonanga mntu. ) Nantsi ifomula: Isihloko + ezelwe + ifom ehlanganisiweyo ye ukuba okanye ukufumana + elidlulileyo elithatha inxaxheba + akukho mntu / akukho ndawo / ni / hayi .
Ngezenzi kwi kufutshane nekamva ( kufutshane nekamva ), gcinani engqondweni ukuba isenzi esidibeneyo ukuhamba ( ukuhamba ), ke ubeke amagama amabini angalunganga macala onke, njengoko usenza ngesiphoso esiqhelekileyo. Umzekelo: Awuyi kwenza nto kule mpelaveki. ( Awuyi kwenza nto kule mpelaveki. )
Iintlungu ezisekunene zangaphezulu kweembambo
Kwi kufutshane nekamva , amagama angenanto Akukho mntu , naphi na , ni , kunye hayi landela isiphelo, hayi ngaphambili. Umzekelo: Awuyi kuthatha naliphi na iyeza. ( Awuyi kuthatha naliphi na iyeza. Nantsi ifomula: Isihloko + musa + ukuhamba + engapheliyo + akukho mntu / naphi na / hayi .
Akukho nto ( akhonto ) kunye Akukho mntu ( Akukho mntu Ngamanye amaxesha inokuba sisenzi sesenzi, njengesiNgesi. Kwimeko apho, qala isivakalisi ngelinye lala magama kwaye uqhubeke rhoqo ezelwe phambi kwesenzi esidibeneyo. Umzekelo: Akukho nto ibalulekileyo ( Akukho nto ibalulekileyo ) kunye Akukho mntu uhlamba izitya ( Akukho mntu uhlamba izitya ). Nantsi ifomula: Akukho nto okanye Akukho mntu + ezelwe + isenzi.
isebenza ngokukhawuleza kangakanani i-cialis
antibiotics ukunyanga usulelo lwezintso
amagama egama le-folic acid
Iphilisi emthubi ip 102